eHimalayatimes | अन्तर्वार्ता | गाउँको रोचक कथामा मिस्टर झोले
23rd January | 2019 | Wednesday | 8:25:30 AM
गाउँको रोचक कथामा मिस्टर झोले
POSTED ON : Wednesday, 10 January, 2018 (3:21:59 PM)
काठमाडौं । यही पुस २८ अर्थात् आउँदो शुक्रबारबाट चलचित्र ‘मिस्टर झोले’ देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदै छ । दयाहाङ राई, दिया पुन, बुद्धि तामाङलगायतको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्रलाई निर्माण टिमले आशलाग्दो चलचित्रको रूपमा लिएको छ । टेकेन खड्का प्रोडक्सन र सिनेमा आर्टको सहकार्यमा निर्माण भएको ‘मिस्टर झोले’ लाई यसै ब्यानरबाट यो भन्दा अघि प्रदर्शन भइसकेको ‘झोले’ चलचित्रको नामसँग मिल्न गएपनि त्यस चलचित्रसँग कुनै सम्बन्ध नभएको निर्माण टिमले जनाउँदै आएको छ ।
चलचित्रमा रामबाबु गुरुङको कथा÷निर्देशन रहेको चलचित्रमा दयाहाङ राई, वर्षा राउत, दिया पुन, पुस्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, प्रवीण खतिवडा, अरुणा कार्की, कमलमणि नेपाललगायत कलाकारको अभिनय छ । चलचित्रमा कालीप्रसाद बास्कोटा र सुजेन कार्कीको संगीत रहेको छ भने रवि न्यौपानेको छायांकन, निमेष श्रेष्ठको सम्पादन र विक्रम स्वारको कोरियोग्राफी छ । यसैबीच यसै चलचित्रका निर्माता मध्येका एक रौनक विक्रम कँडेल र कलाकार दयाहाङ राईसँग हिमालय टाइम्सका गोपिकृष्ण चापागाईंले ‘मिस्टर झोले’ विशेष केही सम्वाद गरेका छन् ।
रौनक विक्रम कँडेल / निर्माता
धेरै दर्शकलाई दुवै चलचित्रका कलाकार, निर्माण टिम र नामले गर्दा ‘मिस्टर झोले’ र ‘झोले’ उस्तै चलचित्र हो भन्ने जिज्ञासा छ, चलचित्रमा फरक के छ ?
चलचित्रको टिम र कलाकार एउटै भए भन्दैमा चलचित्र एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन । दर्शकलाई हामीले प्रष्ट यो कुरामा बनाउँछौं कि हाम्रो ‘मिस्टर झोले’ र ‘झोले’ विल्कुल फरक चलचित्र हुन् । एउटै टिम हुँदा चलचित्र बलियो बन्छ । पहिलाका कमीकमजोरीलाई केलाएर झन् राम्रो बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भनेर चलचित्र निर्माण गरेका छौं । चलचित्रको कथा त विल्कुलै फरक छ ।
‘मिस्टर झोले’ एक गाउँको रोचक कथा हो । चलचित्रका मुख्य अभिनेता दयाहाङ राईको अभिनय एउटै भन्ने सन्दर्भमा चाँहि कुनै पनि कलाकारको विल्कुलै फरक अभिनय हुँदैन । जुनसुकै चलचित्रमा भएपनि कलाकारले गर्ने अभिनय नै हो, कस्तो भूमिका निभाएको छ भन्नेकुरा ठूलो कुरा हो ।
चलचित्र निर्माणमा मात्र कसरी आउनु भयो ? अभिनयमा पनि आउन सक्नुहुन्थ्यो ।
मेरो बानेश्वरको घरमा चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पहिलेदेखि नै बस्नुहुन्थ्यो । विस्तारै चिनजान बढ्दै गएपछि नेपाली चलचित्रक्षेत्र पनि राम्रो बन्दै गएको र लगानी गर्दा घाटा नहुने बुझेपछि नै यो क्षेत्रमा आएको हुँ । यो क्षेत्रमा आउन सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, सुनिल थापालगायतसँगको कुराकानीले सहयोग पु¥यायो । त्यो बेलामा अभिनयभन्दा निर्माणपक्षबाट आउँछु भन्ने लाग्यो ।
निर्माताको हकमा ‘मिस्टर झोले’ बाट कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
कतिपय निर्माताहरू चलचित्र लगानी गर्न आत्तिएर आउनुहुन्छ । हृवात्तै आउनुहुन्छ अनि सेलाएर जानुहुन्छ तर यो क्षेत्रमा बुझेर लाग्नुपर्छ । मैले सुरुमा ‘कबड्डी’ चलचित्रमा लगानी गर्दा धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएँ । त्यसपछि निर्माता भएरै ‘पुरानो डुंगा’ मा आउँदा चलचित्र क्षेत्रलाई अझ धेरै बुझिसकेको थिएँ । त्यसबाट पनि आम्दानीको तबरबाट हेर्दा राम्रो भयो । हामीले चलचित्रका लगानी गर्दा चलचित्रको स्क्रिप्ट हेरेरमात्र गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा लगानी गर्नुहुँदैन । अहिले ‘मिस्टर झोले’ बाट आशावादी छौं ।
किनकि हामीले चलचित्रको स्क्रिष्टदेखि सबैकुरामा ध्यान दिएका छौं । त्यसैले विजनेशको हिसाबमा पनि चलचित्रले राम्रो गर्ने कुरामा ढुक्क छौं ।
अहिले ‘मिस्टर झोले’ मा लगानी कति पुगेको छ ? लगानी सुरक्षित होला ?
अहिले नेपाली चलचित्र धेरै फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रविधिदेखि कलाकारको पारिश्रमिक सबै महँगो हुँदै गएको छ त्यसैले ‘मिस्टर झोले’ मा पनि धेरै नै लगानी भएको छ । चलचित्र १ करोड ६० लाखमा पूरा भएको छ । अब लगानी सुरक्षित हुने सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय चलचित्र कि त ब्राण्डले चल्छ कि त राम्रो स्क्रिप्ट र कलाकारले चल्छ, ‘मिस्टर झोले’ यी सबैकुराले भरिपूर्ण छ त्यसैले आशावादी छौं ।
दयाहाङ राई / अभिनेता
चलचित्रमा तपार्इंको भूमिका ‘झोले’ मा जस्तै छ भन्ने आरोप छ नि ∕
चलचित्रका निर्माता, निर्देशकलगायतका निर्माण एउटै एउटै हुँदा चलचित्रमा पहिलाजस्तो केही गन्ध आउनु स्वभाविक कुरा हो । बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ होला तर भित्री रूपमा क्यारेक्टरको स्वभाव, उसले गर्ने काम केलाउँदै जानेहो भने फरक देखिन्छ । विशेषता फरक छन् एउटै भन्न मिल्दैन ।
तपाईंले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमा भूमिका एउटै भयो भन्ने आरोप खेपिरहँदा यो पेरिफेरिबाट बाहिर निस्किनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा मभित्र त्यत्रो क्षमता छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छ । मेरो केही ‘लिमिटेसन’ हरू होला, त्यसैले नयाँ क्यारेक्टर डिजाइन नगरेको हुनसक्छ । मेरो एउटै भूमिका हुनुमा मेरोमात्र गल्ति हुँदैन । निर्देशकले मैले अभिनय गरेका पहिलाका चलचित्रलाई हेरेर मेरो भूमिका निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
कतिपयले त्यस्तै भूमिका गरिदिनिुप¥यो भन्नुहुन्छ । कतिले मेरो पहिलाका चलचित्रको भूमिका जस्तै स्क्रिप्ट बनाउनुहुन्छ । त्यसैले एउटै भूमिका देखिएको हुनुसक्छ । तर हुबहु एउटै कुनै चलचित्रमा हुँदैन ।
‘मिस्टर झोले’ को बक्स अफिस कलेक्सनले तपार्इंको फिल्मी करिअरलाई महŒवपूर्ण अर्थ राख्छ ?
मैले चलचित्रमा काम गर्ने बक्स अफिसका लागि होइन । एउटा चलचित्रमा काम गर्दा पूर्णतया लगाव दिएर गर्नेकुरा हो । यही बक्स अफिसमा राम्रो ब्यापार भयो भने म अझ व्यावसायिक बन्छु होला तर एउटा अभिनेताको हिसाबले मैलो सोच्दा भोलि सिनेमा हिट भएपनि फ्लप भएपनि मेरो करिअरमाथि होला अथवा तल होला भन्ने सोंच्दिन ।